Shaqaallaha wasaaradda waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare ayaa ka qeyb galay Ololoaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo tiyaatarka qaran iyo magtabada qaran – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
Shaqaallaha wasaaradda waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare ayaa ka qeyb galay Ololoaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo tiyaatarka qaran iyo magtabada qaran
Madaxda wasaaradda waxbarashada iyo shaqaalaha wasaaradda maanta waxaan dhamaanteen ka wada qeyb galnay barnaamijka is xilqaan oo ka socda magtabada qaranka iyo Tiyaatarka qaranka.
Ka wasaarad ahaan waxay noo tahay maalin weyn maadaam aan door muhiim ah ka qaadanay barnaamijkan oo lagu dhisayo xarumaha danta guud.
Waxaan u mahad celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre, oo iska lahaa hal abuurka barnaamijkan.
Shaqaalaha wasaaradda waxbarashada dhammaantood waxaan uga mahad celinaya sida ay ugu soo diyaar garoobeen ka qeyb galka barnaamijka is xilqaan.
Wasiirka waxbarashada Hidda iyo Tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre oo ay weheliyaan wasiir ku xigeenka, wasiiru dowlaha, agaasimaha guud iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ayaa maanta ka qeyb galay barnaamijka isxilqaan oo ka socda Tiyaatarka qaranka iyo Magtabada qaranka.
Ololahan maanta ay ka qeyb galeen madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ayaa lagu dhisaya xarumaha danta guud ee dalka.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Mudane. Xassan Maxamed Cali oo ka qeyb galay barnaamijka isxilqaan ayaa u mahad celiyaya shaqaalaha wasaaradda waxbarashada.
Wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada XFS,Cabdi raxmaan Maxamuud Cabdulle jaabir ayaa sheegay in u mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo iyo ra’’iisul wasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo iska lahaa hal abuurka barnaamijkan.
Wasiirka wasaaradda waxbarashadda XFS,Mudane Cabdulaahi Goodax Barre oo ka qeyb galay barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo tiyaatarka iyo magtabada qaranka ayaa sheegay in ay muuqato ahmiyada uu leeyahay barnaamijka isxilqaan oo ay ku baaqeen madaxweynaha iyo raiisul wasaaraha.
“Maanta waxaan ka qeyb galay barnaamijka is xilqaan oo ka socda tiyaatarka qaranka iyo magtabada qaranka ee magaalada Muqdisho, ololahan waxaa igu wehelinayay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada, wasiirul dowlaha, agaasimaha guud iyo shaqaalaha wasaaradda, barnaamijkan is xilqaan waa mid ahmiyad weyn u leh dalka, isxil qaan meelaha maanta shaqada laga qabanaayo waa meelo sigaar ah qiimo ugu fadhiya bahda waxbarashada waxana muhiim ah in bartimaameedka laga dhigto meelaha bulshadu ay ka toosto,”ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulahi Goodax Barre.
Wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sar ee dalka Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay ka go’an tahay inay door muuqda ka qaatan horumarinta dalka.